ZTE Axon 10 Pro: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Eder Ferreno | | Finday, ZTE
ZTE dia tsy te tsy hahita ny fanontana MWC andiany 2019 any Barcelona. Amin'ity hetsika ity, namela antsika finday vaovao ny marika, ny Axon 10. Pro. Efa naneho hevitra izy herinandro vitsivitsy lasa izay fa ilay fitaovana dia haseho ao anatin'ny rafitry ny MWC 2019, zavatra izay nitranga ihany tamin'ny farany. Ity fitaovana ity dia manokana ho an'ny marika, satria izy no lasa voalohany amin'ny laharam-parany hahatratra ny tsena miaraka amin'ny 5G.
Hatramin'ny voalohany, ny marika dia naneho ny fikasany ho iray amin'ireo mpisava lalana amin'ny 5G. Efa tamin'ny taon-dasa dia nanambara ny fikasan'izy ireo hametraka modely miaraka amin'ity fanohanana ny tsena ity. Ny voalohany amin'ireo telefaona ireo dia ofisialy ihany amin'ny farany. Satria efa eto amintsika ny ZTE Axon 10 Pro. Inona no azontsika antenaina amin'ny telefaona?
Toy ny smartphone 5G rehetra hatreto, afa-tsy ny Huawei Mate X, tonga miaraka amin'i Snapdragon 855 ilay fitaovana amin'ny maha-processeur anao. Ka afaka manantena hery lehibe avy aminao izahay amin'ny resaka fampisehoana.
1 Famaritana ZTE Axon 10 Pro
Famaritana ZTE Axon 10 Pro
Mikasika ny famolavolana, ny marika sinoa dia manolo-tena a efijery miaraka amina fefy miendrika rano mitete iray. Araho araka izany ny fironana eo amin'ny tsena amin'io lafiny io, miaraka amin'ity Axon 10 Pro ity. Amin'ny sehatra teknika dia tampon'isa izy io, izay antenain'ny marika hiverina an-tsena taorian'ny olana maro niaretan'ny embargo amerikana tamin'ny taona 2018.
Famaritana ara-teknika ZTE Axon 10 Pro
modely Axon 10 Pro
efijery AMOLED 6.4 Inch Full HD
Tahiry anatiny 128GB (azo ovaina hatramin'ny 512GB miaraka amin'ny microSD)
Fakan-tsary aoriana 48 MP + MP 20 (Malalaka) + telefaona x5
Fakan-tsary aloha 24 MP
Conectividad 5G Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac LTE
Fitaovana hafa Mpamaky ny dian-tànana tafiditra ao amin'ny efijery
bateria 4.300 mAh miaraka amina fiampangana haingana
lafiny 167 x 72 x 8.2 mm
lanja Gramin'ny 180
vidiny Tsy mbola voamarina
Ao amin'ity marika Axon 10 Pro hitantsika ity Qualcomm Snapdragon 855 ao anatiny. Mampiasa modem X24 izy, ho an'ny 4G izay efa tonga zanatany. Raha nifikitra tamin'ny tabilaon-telefaona ny X50, ka efa manana fifandraisana 5G ao aminy. Ny fitaovana voalohany an'ny marika sinoa nanome an'ity fanohanana ity ho an'ireo mpampiasa.
Ho an'ny GPU Adreno 640 dia nofidina tamin'ny fitaovana, izay mamela ny fahefana lehibe amin'io lafiny io. Ho fanampin'ny fananana motera fahita solon-tsaina avy any Qualcomm. Antenaina fa hanana fisian'ireo fakantsary fakantsary ihany koa ny faharanitan-tsaina, ka hanatsara izany fomba izany.
Ny sensor sensor dia nampidirina ambanin'ny efijery, araka ny hitantsika amina maodely marobe ao anatin'ny Android avo lenta ankehitriny. Izy io koa dia manana famohana ny tarehy, noho ny fakantsary fakan-tsary eo alohan'ilay fitaovana. Etsy ankilany, ny orinasa dia nanolotra hevi-dehibe sasantsasany noho ny fisian'ny Android Pie, toy ny bateria marani-tsaina na ny fifehezana ny fihetsika.
Tonga ny ZTE Axon 10 Pro miaraka amina fakan-tsary any aoriana. Marika maro amin'ity MWC 2019 ity no mamela antsika maodely miaraka amina fakantsary triple aoriana voalaza, zavatra miverina amin'ny marika sinoa. Ny lehibe indrindra dia 48 MP, raha manana zoro 20 MP izahay avy eo ary ny fahatelo dia zoom optika 5x, izay tsy fantatra ny famahana azy amin'izao fotoana izao. Ho fanampin'izany, noho ny faharanitan-tsaina artifisialy dia hanana fomba manjavozavo isika, zoom zoom, ary fakana sary mihetsika amin'ireo fakantsary ireo.
Mahita andiany tokana an'ity avo lenta ity izahay, amin'ny resaka RAM sy fitehirizana anatiny. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nanome daty famoahana manokana ho an'ity ZTE Axon 10 Pro ity ny orinasa. indraindray amin'ny enim-bolana voalohany amin'ny taona. Mety ho tonga amin'ny volana Jona izy io, toy ireo maodely 5G hafa natolotra.
Tsy manana data momba ny vidiny ihany koa izahay hanananao ity sainam-pirenena vaovao ity amin'ny fahatongavany any amin'ny magazay. Manantena izahay fa handre bebe kokoa momba an'io sy ny daty famoahana azy tsy ho ela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » ZTE » ZTE Axon 10 Pro: telefaona voalohany an'ny marika misy 5G
Galaxy A50: ny afovoany vaovao an'ny Samsung